महराबारे किन बोलेनन् विप्लव ? « रिपोर्टर्स नेपाल
महराबारे किन बोलेनन् विप्लव ?
प्रकाशित मिति : 2019 October 4, 10:15 am
काठमाडौं, १७ असोज । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि रोशनी शाहीले जर्बजस्तीको आरोप लगाएलगत्तै पूर्व माओवादी नेता समेत रहेका समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले कडा प्रतिक्रिया जनाए । उनले मी टु जस्तै घटना भासभुस हुन नहुने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखे ।
तर, विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव मौन छन् । नेकपाले यस घटनाबारे कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । विभिन्न दल र तिनका नेताबाट धारणा आइरहँदा सत्ताविरुद्ध उत्रिएको विप्लवले नबोल्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
विप्लव कुनैबेला महराका चेला थिए । महरा उनका राजनीतिक गुरु पनि हुन् । पूर्व सहकर्मी भएकाले पनि विप्लव नबोलेको हुनसक्ने ठम्याई छ ।
महराले विद्रोही बनेका विप्लवलाई लक्षित गरी कहिले पनि कडा अभिव्यक्ति दिएनन् । यसकारण पनि दुवैबीच सम्बन्ध सामान्य रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
सत्ताधारी र तिनका नेताबाट कुनै त्रुटी भएमा मात्र पनि आफै बोल्ने या बोल्न लगाउने विप्लव यसपटक अझै मौन छन् । १२ असोजको राति भएको भनिएको घटना १३ असोजमा सार्वजनिक भयो । त्यसपछि घटनाले अनेकन मोड लियो । सभामुख पदबाट महराले राजीनामा दिए । तैपनि विप्लव बोलेनन् । न उनले महराप्रति सद्भाव देखाए न त उनको आलोचना गरे ।
सत्ताधारीको भण्डाफोर अभियानमा लागेका विप्लवको मोनता किन ? कतै उनी पूर्व सहकर्मीप्रति लचिलो त भएका होइनन् ? आफ्ना राजनीतिक गुरुप्रति उनको सदभाव त होइन ?
मोदीलाई बौद्ध विश्वविद्यालयले महाविद्यावारिधि प्रदान गर्दै
काठमाडौं, बैशाख २८ । २ जेठमा बुद्धजयन्तीको अवसर पारेर एकदिने औपचारिक भ्रमणमा नेपाल आउन लागेका
स्थानीय तह निर्वाचनः कुन पदमा कति उम्मेदवार?
काठमाडौं, बैशाख २८ । निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नगर प्रमुखमा ३ हजार
काठमाडौं, बैशाख २८ । ३० वैशाखमा हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनका मतदाताहरूले काठमाडौं उपत्यकामा थुप्रिएको